🥇 पाठ्यक्रमहरूको लागि कार्यक्रम
रेटिंग: 4.9. संगठनहरूको संख्या: 163
पाठ्यक्रमहरूको लागि कार्यक्रम
पाठ्यक्रमहरूको लागि भिडियोको भिडियो
पाठ्यक्रमहरूको लागि कार्यक्रम अर्डर गर्नुहोस्
तपाईको पाठ्यक्रमहरूको लागि आदर्श कार्यक्रम खोज्न रोक्नुहोस्! यो पृष्ठमा यहाँ र अहिले फेला परेको छ। युएसयूबाट कोर्सहरूको लेखाको लागि कार्यक्रमले तपाईंको संगठनलाई स्वचालित गर्न मद्दत गर्दछ, तपाईंलाई चलिरहेका गतिविधिहरू र तपाईंको व्यवसाय प्रबन्ध गर्ने विधिहरू हेर्न अनुमति दिनेछ। र, अवश्य पनि, यसले तपाईंको व्यवस्थापनमा उत्पादक नियन्त्रणको नयाँ अवसरहरू दिन्छ। सबै भन्दा पहिले, हाम्रो पाठ्यक्रमहरूको लागि कार्यक्रम व्यक्ति द्वारा प्रयोग गर्न मानिसहरू द्वारा बनाईएको हो। टोटोलोजीका लागि हामीलाई माफ गर्नुहोस्, तर यो यहाँ उपयुक्त छ, किनकि मानवतामा जोड दिइएको छ। अरूलाई शिक्षा प्रदान गर्न आफैलाई समर्पण गरेका व्यक्तिहरूप्रति मात्र हाम्रो कृतज्ञताले हामीलाई एक अद्वितीय कार्यक्रम सिर्जना गर्न प्रोत्साहित गर्‍यो, जसको एकमात्र उद्देश्य भनेको तपाईंको दैनिक मेहनतको सुविधा हो। तर यो भन्नु उचित छ कि यो महान लक्ष्यसँग रमाइलो बोनस र अद्भुत प्रकार्यहरू छन् जुन अहिले आवश्यक छ। पहिलो महिनाको अवधिमा तपाई आश्चर्यचकित हुनुहुनेछ कि पाठ्यक्रमहरूको लागि कार्यक्रम कत्ति प्रभावकारी छ र यसले तपाईंको व्यवसायको प्रबन्धनलाई कती सहयोग पुर्‍याउँछ। र यसले तपाईंलाई कत्तिको प्रेरणा दिन्छ, एक व्यवस्थापकको रूपमा, र एकै साथ कर्मचारीहरू! यो कत्तिको व्यापक छ भनेर मूल्या To्कन गर्न, हामी यो पृष्ठ तल मुनि जान सिफारिस गर्दछौं र पाठ्यक्रमहरूको लागि कार्यक्रमको डेमो संस्करणको सक्रिय लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्। यसले विस्तृत रूपमा मुख्य सुविधाहरू प्रस्तुत गर्दछ, र प्रश्नको मूल्य केहि पनि छैन। नियन्त्रण प्रणालीको डेमो संस्करणको स्थापना पूर्ण रूपमा निःशुल्क छ। यदि तपाईं संक्षिप्त रूपमा कार्यक्षमता मार्फत चलाउनु हुन्छ भने हामी यो भन्न चाहन्छौं कि कार्यहरू प्रशासकद्वारा प्रयोगकर्ताहरू बीच वितरित गरिएको छ। जैसा कि तपाईंले पहिल्यै अनुमान लगाइसक्नु भएको छ, प्रशासक एक प्रबन्धक वा उसको वा उनको डिप्टी वा, हुनसक्छ, एकाउन्टेन्ट वा अन्य विश्वसनीय व्यक्ति हुन् जसको पहुँचको सुरूमा हाम्रो कार्यक्रममा निश्चित गरिएको छ।
प्रणालीमा प्रवेश गर्ने प्रयोगकर्ताहरूसँग पहिलो नजरमा साझा तस्वीर हुन्छ, तर उनीहरूको पहुँचको स्तर कार्डिनली आफूलाई छुट्याउँछ। उदाहरण को लागी, व्यवस्थापकको कार्यक्रम भित्र क्वेरियर्सका लागि कुनै सीमा छैन: ऊ वा उनी प्रयोगकर्ताको तर्फबाट सुरूवात ईतिहास हेर्न सक्दछन्, संचालन कार्यहरू, सारांश रिपोर्टहरू, एनालिटिक्स र तथ्या statistics्कहरू छन्, तर यी प्रश्नहरू मध्ये कुनै पनि साधारण प्रयोगकर्तालाई उपलब्ध छैन। । पाठ्यक्रम व्यवस्थापन र रेकर्ड राख्ने सफ्टवेयरले एक इलेक्ट्रोनिक तालिका उत्पन्न गर्दछ र तपाईंको संस्थाको शैक्षिक सुविधाहरूको तर्कसंगत प्रयोगको सुनिश्चित गर्दछ। साथै, उपस्थिति पत्रिकाले पाठ्यक्रम कार्यक्रममा यसको ठाउँ भेट्टाउनेछ। रेटिंग कायम राख्नु सधैं कामदारहरूको लागि ठूलो प्रोत्साहन हो, र यदि यो पनि खुला छ भने, यसले दैनिक प्रोत्साहन दिन्छ। एकचोटि तपाईंले व्यवस्थापन प्रणाली प्रविष्ट गर्नुभयो जुन उनीहरूलाई विभिन्न प्यारामिटरहरूद्वारा तुलना गर्दछ र संख्यात्मक मानमा परिणामहरू प्रदर्शन गर्दछ, कुनै शिक्षक उदासीन हुँदैन, र पाठ्यक्रमको लागि प्रयास गर्दछ, अग्रणी पदहरूमा उच्च आरोहण गर्न। र यदि अग्रणी पदहरू सक्रिय रूपमा मौद्रिक बोनस द्वारा पुरस्कृत छन्, यसको बहुमूल्य शिक्षकहरूको मूल्या rating्कनको साथ पाठ्यक्रम कार्यक्रमले दुईवटा चराहरूलाई एउटा ढु stone्गाले मार्नेछ: यसले अनैच्छिक रूपमा कर्मचारीहरूलाई सफल हुन प्रोत्साहित गर्दछ र स्वतन्त्र रूपमा सबै भन्दा राम्रो कर्मचारी छनौट गर्दछ र उसलाई / उनलाई पुरस्कार दिनेछ। एक राम्रो योग्य बोनस र हो, तलब लेखाई पनि कोर्सको लागि कार्यक्रमको लक्ष्य हो। के त्यस्तो स्वतन्त्र कर्मचारी पाउँदा राम्रो लाग्छ, जसले सम्पूर्ण टीमको शेरको हिस्सा बनाउँछ? त्यसोभए तपाईंले तुरून्त आफ्नो उपकरणमा यो बहुमूल्य प्रोग्राम स्थापना गर्नु पर्छ!
कार्यक्रमको नयाँ संस्करणले तपाईंलाई टेबुलमा सूचनाको प्रदर्शनलाई अनुकूलित गर्न अनुमति दिन्छ। ग्राहक डेटाबेसको उदाहरण विचार गरौं। त्यहाँ निश्चित पाठ क्षेत्र छ ote यसले महत्त्वपूर्ण जानकारी समावेश गर्दछ जुन प्रयोगकर्ताले देख्न मिल्छ, तर यो विस्तृत छ। पहिले, क्षेत्र आफैं कुनै नाप तान्न पर्ने थियो, जुन एकदम असक्षम थियो। नयाँ संस्करणमा तपाई टेबुलमा फिल्डहरूको प्लेसमेन्ट नियन्त्रण गर्न सक्नुहुनेछ क्षैतिज हवाईजहाजमा मात्र, तर ठाडोमा पनि! तपाईंले गर्नुपर्ने सबै भनेको माउन्ट कर्सर समोच्च समात्नुहोस् र यसलाई सही ठाउँमा तान्नुहोस् वा कुनै फिल्डको उचाई बढाउनुपर्दछ। अब तपाईं सजिलैसँग आफ्नो तालिकालाई अनुकूलन गर्न सक्नुहुनेछ। हेडरहरू धेरै पows्क्तिहरूमा राख्न सकिन्छ, र क्षेत्रहरूको उचाइ आफैलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ आवश्यक तत्वहरूमा जोड दिन। थप सफ्टवेयर विकासले नयाँ कार्यक्षमता थप्छ र कार्यक्रममा तपाईंको कामलाई अझ सुविधाजनक र उत्पादक बनाउँछ। एक निश्चित प्यारामिटर द्वारा तालिकामा समुहबद्ध गर्न अब तपाईंलाई स्पष्ट रूपमा रकम गणना गर्न अनुमति दिन्छ। अब तपाईं कुल रकम मात्र देख्न सक्नुहुन्न, तर सबै अन्तरिम भुक्तान र debtsण पनि। पाठ्यक्रमहरूका लागि कार्यक्रमले रेकर्डको संख्या मात्र होइन, समूहहरूको संख्या पनि गणना गर्दछ। तपाईं जहिले पनि कुनै नमूनामा अद्वितीय मानदण्डहरूको संख्या देख्न सक्नुहुनेछ। केसलाई विचार गर्नुहोस् जब तपाईंलाई केहि फिल्डहरू भर्नु आवश्यक पर्दछ, तर धेरै विरलै। पहिले, तिनीहरू प्रायः तपाईको लागि आँखा हो, किनभने सम्पादन गर्दा, कार्यक्रमले सम्पूर्ण रूपमा देखायो, जसले ध्यान खारेज गर्‍यो। अब तपाईं यी वैकल्पिक क्षेत्रहरूलाई एउटा समूहमा समावेश गर्न सक्नुहुनेछ र तिनीहरूलाई केवल एक क्लिकले लुकाउनुहोस्। उदाहरण को लागी, यहाँ एक ग्राहक रेकर्ड सम्पादन को लागी रेकर्ड छ। मानौं तपाईं प्रत्येक पटक सम्पर्क जानकारी वा अतिरिक्त सेक्सन हेर्न चाहानुहुन्न - केवल ग्रुपिंग लाइनमा क्लिक गर्नुहोस् र यो लुक्नेछ! विन्डो कार्यक्षमता नगुमाई धेरै अधिक कम्प्याक्ट छ। डाटा खोजी विन्डोमा पनि यस्तै गर्न सकिन्छ। यदि तपाईं अधिक जान्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं हाम्रो आधिकारिक वेबसाइट भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईं सबै आवश्यक जानकारी फेला पार्नुहुनेछ। यस बाहेक, तपाइँले पाठ्यक्रमहरूको लागि प्रोग्रामको नि: शुल्क डेमो संस्करण डाउनलोड गर्ने अनौंठो मौका पाउनुहुनेछ जुन तपाइँको व्यवसाय व्यवस्थापनमा यसले ल्याउने सबै सुविधाहरू देखाउँदछ।
अध्ययन र पाठ्यक्रमहरू
शिक्षकहरूको लागि लेखा
समूह वर्गहरूको लागि लेखांकन
बालवाडी को लागी लेखा
भाषा पाठ्यक्रमहरूको लागि लेखांकन
पूर्वस्कूली शिक्षाको लागि लेखा
अध्ययनका लागि लेखांकन
शिक्षक समय को लागी लेखा
विश्वविद्यालय को लागी लेखा
शिक्षा मा लेखा
शैक्षिक संस्थानहरूमा लेखा
बच्चाहरूको केन्द्रको लेखा
बालवाडीमा बच्चाहरूको लेखा
पाठ्यक्रम को लेखा
पाठ को लेखा
विद्यार्थी उपस्थितिको लेखा
प्रशिक्षण को लेखा
प्रशिक्षण केन्द्र को लेखा
प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को लेखा
विश्वविद्यालय को लेखा
प्रशिक्षणका लागि कम्प्युटर प्रोग्रामहरू
पाठ्यक्रमहरूको लागि कम्प्युटर प्रोग्राम
शैक्षिक संस्था को लागी नियन्त्रण
शिक्षा मा नियन्त्रण
शैक्षिक गतिविधि को नियन्त्रण
समय सारिणीहरू कोर्दै
शैक्षिक संस्था प्रबन्धन कार्यक्रम
शैक्षिक संस्था व्यवस्थापन प्रणाली
शैक्षिक प्रक्रिया लेखा
शैक्षिक प्रक्रिया व्यवस्थापन
समूह वर्ग तालिका
शिक्षा मा लेखा को लागी जर्नल
स्कूल मा लेखा को लागी जर्नल
अध्ययन को लेखा को लागी जर्नल
पाठको लेखाको लागि जर्नल
प्रक्रिया विश्लेषण सिक्दै
प्रिस्कूल शैक्षिक संस्थाको लागि व्यवस्थापन
बाल केन्द्रको व्यवस्थापन
शैक्षिक संस्था को व्यवस्थापन
शैक्षिक संगठन को व्यवस्थापन
पूर्वस्कूली संस्था व्यवस्थापन
शैक्षिक पाठ्यक्रमहरूको लागि कार्यक्रम
विद्यार्थीहरूको लेखा को लागी कार्यक्रम
ड्राइभिंग स्कूल को लागी कार्यक्रम
प्रारम्भिक बाल्यकाल स्कूलको लागि कार्यक्रम
पाठ समय सारिणीको लागि कार्यक्रम
मोडल स्कूलको लागि कार्यक्रम
प्रिस्कूलको लागि कार्यक्रम
विद्यालयको लागि कार्यक्रम
बच्चाहरूको रचनात्मकताको केन्द्रका लागि कार्यक्रम
तालिम केन्द्रका लागि कार्यक्रम
समय सारिणीका लागि कार्यक्रम
प्रशिक्षण पाठ्यक्रमहरूको लागि कार्यक्रम
उपस्थिति लेखाको लागि सफ्टवेयर
विद्यार्थी सिक्ने नियन्त्रण
बालवाडीको लागि कार्यक्रम
प्रशिक्षण केन्द्र व्यवस्थापन